Ny teny niaina hadisoana manandrana manokatra ny rakitra
Home Products DataNumen Word Repair Ny teny niaina hadisoana manandrana manokatra ny rakitra
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny hadisoana "Ny fanandramana teny nanandrana nanokatra ny rakitra" dia ny teny
Rehefa manokatra tahirin-kevitra Word simba miaraka amin'i Microsoft Word 2003 ianao dia mahita izao hafatra diso izao:
Teny niaina hadisoana nanandrana nanokatra fisie.
Andramo ireto sosokevitra ireto.
* Zahao ny fahazoan-dàlan'ny rakitra momba ilay rakitra na fiara.
* Hamarino tsara fa ampy ny memoara sy ny kapila malalaka.
* Sokafy ny rakitra miaraka amin'ny mpanova Text Recovery.
Tsindrio ny bokotra "OK" hanakatonana ny boaty hafatra.
Rehefa simba ny ampahany sasany amin'ny rakitra Word dia hahazo ireo hafatra diso voalaza etsy ambony ianao. Ary raha mafy ny kolikoly ary tsy hain'ny Word ny mamerina azy dia azonao atao ny mampiasa ny vokatray DataNumen Word Repair hanamboatra ny rakitra Word ary hamaha ity lesoka ity.
Indraindray Word dia afaka mamerina ny ampahany amin'ny atiny ao amin'ilay antontan-taratasy maloto, fa ny ampahany sisa kosa tsy azo averina. Amin'ny tranga toy izany, azonao atao ihany koa ny mampiasa DataNumen Word Repair hamerina ireo faritra ireo.
Ohatra ny rakitra rakitra Word maloto izay hiteraka ny lesoka. Error6_1.doc
Ny rakitra dia namboarina tamin'ny DataNumen Word Repair: Error6_1_fixed.doc